Kan Dhaga’ee Nuuf Ha Birmtu!
Jimaata, Guraandhalaa 12, 2016 Local time: 04:17
WASHINGTON DC— Baqatoota Ertraa fi Itiyoophiyaa kanneen Suudaan irraa ka’anii gammojjii sinaa kan Masrii keessa darbuun Israa’eel seenuuf yaalan irratti dararaa jabaan akka dhaqqabu gabaasamaa jira.Mooraa Baqatoota Suudaan keessaa butamanii darbaa dabarsa gurguramaa Gammojjii Sinaa yeroo dhaqqaban, maatiin warra butame kanaa lafa jiran irraa maallaqa guddaa akka ergan gaafatamu.
Maallaqa gaafataman kana erguuf humna hin qaban taanaan baqatonni kun ituu lubbuun jiranii qaama isaanii ciranii kalee, Tiruu fi Onnee fudhu jedhu gabaasaaleen adda addaa.Sana booda carraan isaanii du’a qofa taati.
Kaayiroo irraa kan baqataan tokko dubbate dhaggefadhaa.
Gaaffii di Deebii
Gaaffii di Deebiii